Ingilazi yeWindows kaPulasitiki
Ingilazi yeWin Stemless
I-Double Wall Glass
I-Ice Cream Mug
I-2020 Online Canton Fair
UCharmlite uhambele umcimbi we-127th Canton Fair oqale ukusuka ngomhlaka 15 kuJuni, uphela ngomhlaka 24 kuJuni. Kukhetheke kakhulu ngoba iCanton Fair, eyaziwa nangokuthi iChina China and Export Fair, yathuthelwa efwini okokuqala selokhu yasungulwa eminyakeni engama-63 eyedlule. ...
Izeluleko Zewayini Zesazi: Indlela Yokwenza Spot High Glassware
Izibuko zewayini ziyingxenye enkulu yesiko nemidlalo yaseshashalazini yewaini - enye yezinto zokuqala oziqaphelayo ngendawo yokudlela enhle, ikakhulukazi eyisitayela esentshonalanga - ingilazi elisetafuleni. Uma umngani ekupha ingilazi yewayini lapho ungena ephathini, ikhwalithi yengilazi ayiphathayo ...
I-2019 Autumn Canton Fair neHong Kong Lifestyle Show
Ngo-Okthoba 2019, i-Charmlite Co, ltd. uye emibukisweni emibili yebhizinisi: 2019 Autumn Canton Fair & Hongkong Global Source Lifestyle show. Amakhasimende angama-581 aqhamuka emazweni ahlukahlukene angama-57 ahambele idokodo lethu. ...
Uhambo lweviki elilodwa lokuya eThailand
UCharmlite unohambo lonyaka lwe- "mibuthano womndeni". NgoNovemba 2019, saya eThailand ukuyothamela amasiko eThailand namasiko aleli lizwe angaqondakali. Letha isikhwama sakho semithwalo, uphathe ~
I-2019 Spring Canton Fair
ngu admin kuJun-03-2019
Ukuxoxa ubuso nobuso kuthuthukisa ukuqonda kwethu komunye nomunye. Abangani bakudala bayakujabulela ukuba nengxoxo emnandi ngemuva kokubambisana kaningi, amakhasimende amasha ayajabula ukubona abangane abasha benethuba elihle lokusebenzisana. ...
Ukuthokozela isikhathi sindawonye, ​​nokwabelana nabanye, impilo enhle iyisisusa kithi sokuhlinzeka ngezixazululo zobuchwepheshe kubalingani bethu namakhasimende. ...
Iyunithi 1421 & 1422, Buynow Tech. Bldg, No.76 South Hubin Rd, Xiamen, China 361004